Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay qaar ka mid ah askartii la geeyey Gedo - Caasimada Online
Home Warar Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay qaar ka mid ah askartii la...
Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay qaar ka mid ah askartii la geeyey Gedo
Doolow (Caasimada Online) – Maxkamdda darajada 1-aad ee ciidamada qalabka sida qeybteeda 27-aad ayaa xukunno kale duwan ku ridday afar xuux oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka kuwaas oo kamid ahaa ciidamada Nabadsugidda iyo kuwa Militariga ee geeyey Gobolka Gedo.
Askarta xukunka lagu riday ayaa waxay xeer ilaalinta kusoo eedeysay in ay horay u geysteen dilal kale duwan oo ka dhacay gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Afartaan askari ayaa xeer ilaalintu sheegtay in dilal qorsheysan siyaabo kale duwan ay ugu geysteen dad shacab ah, kuwaas oo lagu dilay degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Sidoo kale, Askarta xukunka lagu riday ayaa loo soo jeediyey eedeyn la xiriirta in ay sameeyeen qalqal galin amni, waxaana lagu kala riday xukkunno dil toogayo iyo xabsi ciidan ah.
Dable ka tirsanaa NISA oo lagu magacaabo Bukhaari Axmed Maxamuud iyo Dable Xoogga Dalka Salmaan Ibraahin Shire ayaa lagu xukumey dil toogasho ah.
Halka Dubad Axmed Xuseen Cilmi lagu xukumey Seddax sano oo xarig ah, iyadoo Sharmaake Muxumed Cali isna lagu xukumay hal-sano oo xarig ah.
Guddoomiyaha maxkamada darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida qeybteeda 27-aad, Gashaanle Maxamed Amiin Cabdulle Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunkaan, waxaana sidoo kale eedeysanayaasha la siiyay fursad ay dalban karaan racfaan muddo bil ah kadib markii maxkamaddu xukuntay.